पहिलो तामाङ लेखकको सम्झना- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
पहिलो तामाङ लेखकको सम्झना
कार्तिक २७, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — पहिलो तामाङ लेखक बुद्धिमान मोक्तानको १ सय १८ औं जन्मजयन्ती मनाइयो । राजधानीमा साहित्यिक संस्था तामाङ डाजाङलाई मोक्तानलाई सम्झेको हो । भाषाविद् अमृत योञ्जनले मोक्तानको तस्बिरमा खादा अर्पण गर्दै उनको योगदानको चर्चा गरे ।
वि.स १९५६ कात्तिक २७ गते भारतको दार्जिलिङमा जन्मेका मोक्तानले २०१३ मा ‘जिक्तेन तामछ्योई’ तामाङ वंशावली लेखेका थिए ।
कार्यक्रममा ‘तामाङ प्रकाशनको अवस्था र चुनौती’माथि पनि अन्तर्क्रिया समेत गरिएको थियो । भाषाविद् योञ्जनले तामाङ भाषाका पुस्तकहरू छापिएको भएपनि तिनमा बृहत् तामाङ समाज आउन पनि नसकेको दाबी गरे । तामाङ सञ्चार समूहका अध्यक्ष जगत दोङले तामाङ मिडियाको अवस्था नै कमजोर रहेकाले पनि त्यसको असर प्रकाशनमा परेको औंल्याए । कार्यक्रममा लेखक धनम तामाङको दुई कृति ठुङह्राप/केह्रप् (लोककथा) र ‘सप्सी’ काव्य लोकार्पण गरियो ।
भाषाविद् योञ्जन र तामाङ लोकसम्राट चन्द्रकुमार मोक्तानले कृति सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘ठुङ्ह्राप/केह्राप’ मा तामाङ सभ्यता उत्पत्तिका कथा र ‘सप्सी’मा पश्चिमी तामाङका कथाव्यथा उनिएको लेखक धनमले जनाए । कार्यक्रममा एक दर्जन तामाङ कविहरूले आ–आफ्ना रचना पस्केका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०८:४९
काठमाडौं — पूर्वउपसचिव विष्णुप्रसाद गौलीको स्मृतिमा पुस्तक आएको छ । गौलीपत्नी सीताले प्रकाशन गरेको ग्रन्थमा पूर्वसचिव खेमराज नेपाल, जेनेभास्थित नेपाली राजदूत दीपक धिताल, वीर अस्पतालका विशेषज्ञ प्रा. विष्णुदत्त पौडेल, डा. बमबहादुर जितालीलगायत दुई दर्जनले गौलीसँगको स्मृति लेखेका छन् ।
गौलीको कार्यसम्पादनको स्तर, इमानदारी, बोलीचालीको स्तर र साथीभाइसँगको सहज घुलमिल हुने चारित्रिक गुण देखेर प्रभावित भएको नेपालले लेखेका छन् । गौलीको उपचारका क्रममै मित्रता विकसित भएको वीर अस्पतालका पौडेलले लेखेका छन् । जीवनको अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि हँसिलो रहने र उपचारका क्रममा सिकिस्त हुँदा समेत गुनासो नगर्ने बानीले प्रभाव परेको पौडेलले ग्रन्थमा पोखेका छन् ।